nkwado-HC Packaging Asia
1. iji hụ na iji ihe 100% FSC kwadoro iji belata nsogbu nke ụwa nne anyị.
2.100% recyclable nkwakọ na-enweghị ndị ndọta, enweghị elu usoro, na akwụkwọ plastic inserts. Anyị nkwakọ ngwaahịa nwere ike recycled na dị nnọọ a nzọụkwụ pụọ.
3.Dị ka ọdịnala ọdịnala nke mmanụ ala, a na-eche na ink soy na-abụ ezigbo enyi na gburugburu ebe obibi, nwere ike ịnye agba ndị ziri ezi karị, ma mee ka ọ dịkwuo mfe ịmegharị akwụkwọ.
Oha obodo anyi
Na 2020, ndị ọrụ afọ ofufo HC Packaging nyere ihe karịrị 1,000 awa na mpaghara, site na ịnye ndị okenye nri, nkwado ego na ụlọ akwụkwọ abụọ na Hunan, China, ịkwakọ na inye akwụkwọ maka ụmụ akwụkwọ nọ na mkpa, na ọtụtụ ndị ọzọ.